Octoprint: jikwaa gị 3D ngwa nbipute remotely | ngwaike efu
Isaac | | Nkọwa 3D, Ntu Pi
Ọ bụrụ na-amasị gị Nkọwa 3D, n'ezie ọ ga-amasị gị ịmatakwu banyere ya oru ngo octoprint. Akụrụngwa mepere emepe bara uru maka njikwa ime ngwa ngwa mgbakwunye ndị a. Site na ụdị mmemme a, ị ga-enweta njikwa dị mfe na nghọta, iji nweta nsonaazụ kacha mma na ọrụ gị. Otu nkwado maka mmemme gị Nhazi CAD y mmemme ndị ọzọ dị mkpa maka ụdị mbipụta atọ a.
1 Kedu ihe bụ Octoprint?
1.1 Atụmatụ nke ngwanro a
2 Ngwa mgbakwunye maka Octoprint
2.1 Otu esi etinye ngwa mgbakwunye
Kedu ihe bụ Octoprint?
OctoPrint bụ ngwa na-emepe emepe ka ị nwee ike ijikwa ngwa nbipute 3D. A na-akpọ onye nrụpụta ya Gina Häußge, onye jiri koodu njikwa ya mee ihe maka ngwa nbipute 3D ya. Ma oru ngo ahụ dị ka ihe na-adọrọ mmasị nke ukwuu na onye na-emepụta Spanish BQ dọtara, na-akwado ego mmepe ka OctoPrint bụ ihe ọ bụ taa: otu n'ime ngwanrọ kachasị mma maka ọrụ a ma jiri ya mee ihe n'ụwa nile.
I nwere ike iji ya mee ya jikwaa mbipụta niile n'ụzọ dịpụrụ adịpụ na njikwana-enweghị mkpa ịnọ ya. Na mgbakwunye, ọ na-enwe nghọta ma dị mfe, yana interface weebụ nke naanị ị ga-eji jikọọ ngwaọrụ site na ebe ọ bụla ịchọrọ ijikwa ya na netwọk mpaghara.
Ma ị nweghị ike izipu njikwa na otu ngwa nbipute 3D, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ na net ị nwere ike ijikwa ha niile. Dịka ọmụmaatụ, izipu ọtụtụ faịlụ Gcode na etiti. Ihe dị mma bụ na enwere ike itinye ya na igwe akụrụngwa dị ala, ọbụlagodi na Raspberry Pi SBC. Nke ahụ bụ nhọrọ kacha amasị ọtụtụ ndị ọrụ. Naanị ị ga-eji ngwugwu OctoPi dị.
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughi gị, OctoPrint nwekwara ike ịnye atụmatụ ndị ọzọ, dịka nyochaa ọrụ nke ngwa nbipute site na iji igwefoto ozugbo mara ka mbipụta na-aga na remotely nyochaa na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Ozi ndị ọzọ na nbudata sitere na Octoprint – Peeji oru ngo
Atụmatụ nke ngwanro a
Ugbu a ịmara banyere OctoPrint, ị kwesịrị ịma ihe ọ bụ njirimara bụ isi yana uru nke ị ga-eji sọftụwia a jikwaa nbipute 3D gị:
Ejikwa ngwa nbipute 3D zuru oke.
Ikike iji soro ọrụ na nlekota oru.
Ọ nwere ike ịnye data sitere na ihe mmetụta okpomọkụ.
Ị nwere ike ịhazigharị paramita ma ọ bụrụ na ị hụ na ọ dị mkpa.
Malite ibipụta site na WiFi, yana kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ya ma ọ bụrụ na ọ dị njọ.
Ịcha ọrụ ngwanrọ site na iji igwe Cura (CuraEngine).
Laminator nke na-enye gị ohere ịkpụ ụdị 3D nke ọma, n'ígwé.
Hazie slicer gị wee hazie ka ịchọrọ.
Ndakọrịta na ọtụtụ ụdị FDM extrusion 3D. Karịsịa na FlashForge.
Mepee isi mmalite.
Cross-ikpo okwu (Linux, Windows, macOS na Raspberry Pi).
Nnukwu obodo mmepe iji kwalite ya wee nweta enyemaka ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Modular, nke nwere ike ịgbakwunye ọrụ ekele maka plugins.
Ngwa mgbakwunye maka Octoprint
Dịka m kwuworo, OctoPrint bụ ngwanrọ modular na-akwado plugins iji gbasaa ọrụ ndị bụ isi nke ngwanrọ a. Nke plugins kacha adọrọ mmasị nke ị nwere n'aka gị bụ:
octolapse: bụ ngwa mgbakwunye maka Octoprint na-enye gị ohere ịse foto n'oge a na-ebipụta usoro nke iberibe. Ya mere ị nwere ike iji ha maka vidiyo, nkuzi, ịdekọ otu i siri mee ya, wdg. Na mgbakwunye, ọ dịghị mgbe a na-ahụ isi ebipụta, naanị akụkụ ahụ, na-arụpụta ezigbo ihe.
Femụwe Updater: Ngwa mgbakwunye ọzọ, dị ka aha ya na-egosi, na-enye gị ohere imelite ngwa ngwa nke ngwa nbipute 3D ngwa ngwa. Maka nke a, a ga-ebu ụzọ chịkọta ngwa ngwa, yana nkwado maka Atmega1280, Atmega 1284p, Atmega2560 na Arduino DUE processors.
Igwefoto webụ n'ihuenyo: A na-eji ngwa mgbakwunye ọzọ maka OctoPrint iji nwee ike ịhụ vidiyo na-ebipụta ozugbo na ihuenyo zuru oke. Ihe ngwanrọ ntọala enweghị ike ime. Ọ nwekwara ike igosipụta ozi etinyere na ihuenyo, dị ka oge mbipụta, okpomọkụ, wdg.
Igwefoto Streamer: Ngwa mgbakwunye ọzọ a na-enye gị ohere igosi usoro mbipụta 3D nye onye ọ bụla ịchọrọ, site na nkwanye. Ọ bara ezigbo uru maka mgbasa ozi dị ndụ na nyiwe dị ka Twitch ma ọ bụ YouTube Live.
Octoprint n'ebe ọ bụla: nke a ọzọ na-enye gị ohere iji software remotely, site na ekwentị mkpanaaka ọ bụla na-enwe ike ịhụ ọnọdụ nke 3D ngwa nbipute. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwe ike ịhụ kamera weebụ na mkpanaka gị, ọnọdụ okpomọkụ, ọnọdụ ozugbo, kwụsịtụ ma ọ bụ kagbuo bọtịnụ, nseta ihuenyo, wdg.
Kagbuo Ihe: Mgbe ụfọdụ ị nwere ike hapụla ọtụtụ iberibe na kwụ n'ahịrị ebipụta, ma eleghị anya otu n'ime ha apụọla ma mebie nke ọzọ. Ọ dị mma, na ngwa mgbakwunye OctoPrint a ị nwere ike dozie ọnọdụ a ngwa ngwa. Naanị ị na-ewepụ mpempe nsogbu na-enweghị emetụta mmepe nke ndị ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-azọpụta gị oge na ego.
Discord Remote: na-enye gị ohere ijikọ sava anyị na ngwa weebụ Discord, iziga iwu na ngwa nbipute 3D gị site na bot, wee si otú a jikwaa ya ozugbo. N'ụzọ dị otú a, bot ga-ege ntị n'iwu ndị ahụ ma rụọ ọrụ ndị egosipụtara (malite ibipụta, kagbuo mbipụta, depụta faịlụ STL, weghara foto igwefoto, jikọọ na gbanyụọ ngwa nbipute, wdg).
Isiokwu: na-enye gị ohere iji anya gbanwee ihe nkesa Octoprint, ma ọ bụrụ na ọdịdị ahụ adịghị amasị gị ma chọọ ịhazi ya ka ọ masịrị gị. Na ị gaghị achọ ihe ọmụma nke CSS.
Bipụta Times Genius: Ọ na-enye anyị ohere ịhụ oge mbipụta nke akụkụ ahụ nke ọma, ebe ọ bụ na nke Octoprint dị ntakịrị karịa. Iji mee nke a, ọ na-eji algọridim mgbako dị elu yana Gcodes akụkọ ihe mere eme iji nye oge mbipụta.
Visualizer Ọkwa akwa: N'ikpeazụ, ihe mgbakwunye OctoPrint ọzọ a na-enye gị ohere ịmepụta, site na nhazi, ntupu 3D nke akwa maka nhazi. Ihe bara uru ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mmetụta na-eme ka ọ dị larịị arụnyere n'ime ngwa nbipute 3D, dị ka BLTouch.
Otu esi etinye ngwa mgbakwunye
Ọ bụrụ na ị na-eche ka ị ga-esi jiri plugins ndị a na OctoPrint, ịwụnye ha, ozugbo ebudatara ya, dị nnọọ mfe. naanị ị ga-emerịrị soro usoro ndị ọzọ iji wụnye ya na ihe nkesa:
Nweta sava webụ OctoPrint.
Gaa na ngalaba ntọala Octoprint dị n'akụkụ aka nri elu (akara ngosi wrench).
Ugbu a chọọ ngalaba njikwa ngwa mgbakwunye.
Pịa bọtịnụ Nweta More.
Octoprint na-enye gị ụzọ atọ dị iche iche iji tinye ngwa mgbakwunye:
Wụnye site na ebe nchekwa ngwa mgbakwunye gọọmentị
Wụnye site na URL
Wụnye site na faịlụ ebugoro
Nhọrọ kachasị mma bụ iji repo gọọmentị, n'ihi na ọ bụ nhọrọ kachasị nchebe na nke na-enye gị ụdị ngwa mgbakwunye kachasị ugbu a.
Ozugbo ị họrọla nke ịchọrọ, a ga-etinye ya na ị ga-edozi ya iji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Octoprint: jikwaa ngwa nbipute 3D gị nke ọma
Odroid Go: ngwa iji wuo ngwa njikwa egwuregwu nke gị